Sare u qaadida Cilimiga ku Salaysan khayraadka Badaha Soomaalia.
Jaamacadda City ee Mogadishu iyo Secure Fisheries oo iska kaashanaya sare u qaadida Fahamka Cilimiga ku salaysan ee khayraadka Badaha Soomaalia.
Khubarada culuumta badda ee Jaamacadda City iyo Secure Fisheries ayaa isla hawl gelinaya mashruucyo cilmi baaris ah oo lagu sahminayo laguna soo bandhigayo macluumaad cusub oo la xiriira bey’adda badaha Soomaaliya, khayraadka dhex ceegaaga. Waxaa ahmiyad gooni ah la siin doonaa cilmibaarista ay hogaaminayaan ardayda Jaamacadda City si loo tababaro jiil cusub oo Soomaali ah oo saynisyahanno badeed iyo xeel dheerayaal siyaasadaha badaha leh.
Secure Fisheries waxay falanqayn ay soo saareen 2015kii ku soo bandhigeen warbixintii ugu horreysey ee dhammaystiran ee lagu falanqaynayo xaaladda kaluunka Soomaaliya . Heshiiskan iskaashi waxaa laga filayaa inuu sare u qaado xaaladda aqooneed ee loo leeyahay khayraadka badaha Soomaaliya si loo gaadho ka faaiidaysi waara loona tayeeyo maamulka khayraadka badda.
City University - +252 61 657 8898 OR
Jaamcadda City oo la aasaasay sannadkii 2012, waa Jaamcad aan faa’iido doon ahayn oo ka hawl gasha magaaladda Muqdisho, Soomaaliya hormuudna ka ah helidda tacliin, cilmi-baaris iyo adeeg bulsho oo tayo sare leh.
Daawo Kaluumeysiga Soomaaliya